news2dago | Aprily 2009 | 2
[Ankapobeny ] 20 Aprily, 2009 14:29
Namono olona indray ny TGV
Mitohy ihany ny vono moka ataon'ny FAT. Ny tanjona angamba dia ny handrimpaka ireo mpanohana an'i Ravalomanana koa dia mihomana fa miandry ny tribonaly iraisam-pirenena ao aorina kely ao.
Maro ny maratra ao anosy ao @ izao izaho manoratra izao. Ny maty koa efa misy araka ny loharanom-baovao. Sakanana ny Capsat ny varavana mankao @ hopitaly Hjra.
Manome vaovao eo ihany avy eo.
[Ankapobeny ] 13 Aprily, 2009 12:22
Miarahaba antsika tratry ny fetin'ny Paska!! Somary tara kely vao afaka namoaka lahatsoratra fa voa ny biby ity matôsy ity dia tsy maintsy novonoina tanteraka. Anomboka hanome vaovao @ izay angamba manomboka rahampitso raha sitrapon'ny Tompo.
Manaova fety sambatra daholo
[Ankapobeny ] 09 Aprily, 2009 13:07